UMbalula akangazami ukuphatha i-ANCYL esesethuneni – Maine | News24
UMbalula akangazami ukuphatha i-ANCYL esesethuneni – Maine
Johannesburg – I-ANC Youth League ithi isakholwa ukuthi ilungu le-NEC ye-ANC neliphinde libe nguNgqongqoshe wezamaPhoyisa, uFikile Mbalula, kumele abe ngesinye sezikhulu eziphezulu eqenjini, yize noma kubukeka sengathi akafune lutho oluzomhlanganisa nalokho.
Lolu phiko, olukhethe abaholi elifuna baqhoqhobale izikhundla eziphezulu ku-ANC uma ngabe sekukhethwa abaholi engqungqutheleni yesi-54 yokukhetha ubuholi ngoDisemba, luthe lufuna abaholi abayisikhombisa abasha ezikhundleni ebuholini obuphezulu – nalapho kuzokwakhiwa isikhundla esisha sikaSekela Nobhala Jikelele – nokuyisikundla abafuna siphathwe nguMbalula.
Lolu phiko lweseka lowo owayenguSihlalo we-African Union Commission, uNkosazana Dlamini-Zuma, ukuthi athathe izintambo kulowo owabe engumyeni wakhe ngaphambilini, uMengameli Jacob Zuma, njengoMengameli weqembu.
Ngaphezu kwalokho lufuna osihlalo bezifundazwe, uDavid Mabuza kanye no-Ace Magashule, ukuba bathathe izikhundla zokuba ngoSekela Mengameli kanye noNobhala Jikelele ngokulandelana kwabo.
OLUNYE UDABA: I-ANCYL ishayele uMkhwebane ihlombe ngombiko wakhe ngo-Absa
Kodwa-ke uMbalula akaboni kanjalo njengoba kuthe ngesonto eledlule washiya angalazi ngoMagashule kuTwitter nalapho ethe asimfanele nakancane lesi sikhundla futhi “le ndoda izoqeda lokho osekusele embuthweni wethu. Izowubulala empeleni.”
Ukuphawula kukaMbalula akwehlanga neze kahle kuMengameli we-ANCYL, uCollen Maine.
“… ukwehlisa elinye i-comrade njengoaba enzile [ngo-Ace] – angicabangi ukuthi kuhle. Sisakholwa ukuthi u-Ace angeke ayibulale i-ANC. Uma ngabe uMbalula no-Ace benomlando wabo wezinkinga eFree State lokho akusiyo inkinga yethu,” usho kanjalo.
Ekhuluma nezintatheli ehhovisini lakhe ngoMsombuluko, uMaine uxwayise uMbalula ngokuthi angalinge azame ukuhola lolu phiko lwentsha ngisho “esesethuneni”, wathi walithola ithuba lakhe lokuba nguMengameli we-ANCYL.
Uthi kubacacele ukuthi uMbalula akazimisele ngalesi sikhundla, wathi i-ANC inenqwaba yamalungu abangakhetha kuwona uma ngabe uMbalula engasithathi isikhundla.
Kodwa-ke uMaine ukuqinisekisile ukuthi basazozama ukuxoxisana noMbalula ngalolu daba.